Ubuntu, fantaro ny zava-drehetra momba ity rafitra fiasa maimaimpoana miorina amin'ny Linux | Ubunlog (Pejy 15)
Kit ny fanamboarana Ubuntu ary ilay cd-fiainana
Fampidirana ny fomba hananana ao amin'ny Kit Customization Kit anay izay programa ahafahantsika mamorona cd-live Ubuntu anay.
Google Drive sy ny mpanjifany ao amin'ny Ubuntu
Alefaso ny momba ny safidy azo atao mba hananana ny serivisy Google Drive anay ao Ubuntu tsy mila mpitety tranonkala.
Optimize Ubuntu (bebe kokoa)
Alefaso izay manangona tetika maromaro hanatsarana ny rafitra Ubuntu. Efa tranainy ireo fikafika ireo saingy navaozina amin'ny Ubuntu version 12.10 izy ireo.
Fanamarinana ny sonian'ny GPG an'ny sary fametrahana OpenSUSE
Torolàlana tsotra manazava ny fomba hanamarinana ny sonia GPG an'ny sary fametrahana OpenSUSE, amin'ny fampiasana openSUSE 12.3 ho ohatra.
Gedit, mpikirakira sa mpanonta fehezan-dalàna?
Mandefasa momba an'i Gedit, tonian-dahatsoratra sy mpanodin-teny izay napetrakao ao anaty fizarana Ubuntu sy Gnome.
Synaptic, mpitantana Debianite ao Ubuntu
Alefaso momba ny fampisehoana sy ny fametrahana Synaptic. Mpitantana fonosana nolovaina tamin'i Debian avy amin'i Ubuntu ary natosik'i Canonical ankehitriny.
Vmware Player rindrambaiko virtualization ho an'ny Ubuntu
Mandefasa momba ny fametrahana ao amin'ny Ubuntu an'ny programa Vmware Player izay mamela ny virtoaly hiasa virtoaly ao anatin'ny rafitra fiasa hafa.
Thunar amin'ny maha mpitantana rakitra ao Ubuntu
Lahatsoratra azo ampiasaina momba ny fametrahana Thunar ao amin'ny Ubuntu ary ny fomba fampiasana ny rafitra azy io amin'ny toerana misy anao fa tsy Nautilus.
FBReader, mpamaky e-book maimaim-poana sy azo alamina
FBReader dia mpamaky amin'ny e-book malalaka, azo alefa - azo alaina ho an'ny Linux sy Android, ankoatry ny hafa— ary azo alamina tanteraka.
Virtualization sy milina virtoaly ao Ubuntu
Alefaso momba ny virtualization sy ny milina virtoaly ao Ubuntu. Ny sary dia nalaina tamin'ny fampiasana ny fampiharana VirtualBox miaraka amin'ny lisansa Open Source.
Fluxbox amin'ny Ubuntu
Fametrahana fototra mpitantana varavarankely ao Ubuntu. Ny manager dia Fluxbox, derivative an'ny Blackbox ary efa antitra ao amin'ny repositories Ubuntu.
Manova habe sy lohahevitra momba ny kora ao amin'ny KDE
Ny fanovana ny habe sy ny lohahevitr'ilay kursor ao amin'ny KDE dia tsotra tsotra noho ilay modely fanaingoana 'Cursor theme'.
File Managers ao amin'ny Ubuntu
Mandefasa momba ny mpitantana rakitra ao amin'ny Ubuntu milaza ny mety ho fisehon'ity rafitra fiasa ity.
Desktops vs Window Managers ao Ubuntu
Mandefasa momba ny mpitantana ny birao sy ny fikandrana amin'ny Ubuntu. Ahoana ny itovizany sy ny mahasamihafa azy ireo ary iza no malaza indrindra ao amin'ny Ubuntu.
YouTube ho MP3, fitaovana hakana feo avy amin'ny horonantsary YouTube
YouTube to MP3 Converter dia programa iray ahafahantsika mamoaka mora foana ny audio amin'ny horonantsary YouTube. Azo ampidirina ny lisitra filalaovana iray manontolo.
Fanekena ny kabary amin'ny Linux
James McClain dia namolavola fitaovana iray izay mamela amin'ny fomba tsotra, ny fanekena ny kabary amin'ny Linux. Siri ho an'ny Linux, hoy ny sasany.
HUD 2.0, fitaovana feno kokoa
Ao ambadiky ny HUD aseho ao amin'ny doka takelaka Ubuntu dia asa lehibe. Jerena manokana ny fanekena ny kabary.
Ny fahasamihafana misy eo amin'ny LibreOffice 4.0 sy Microsoft Office 2013
Ianaro ny fahasamihafana misy eo amin'ny LibreOffice 4.0 sy Microsoft Office 2013 amin'ny alàlan'ny tabilao fampitahana navoaka tao amin'ny wiki The Document Foundation.
KDE: Apetaho eo amin'ny tsanganana lohateny ny boro fisehatra
Ao amin'ny KDE SC 4.10 dia azo atao ny manafina ny baran'ny menio ao amin'ny baravarankely, manolo azy amin'ny bokotra ao amin'ny tsanganana lohateny. Ary tena tsotra izany.
Mametraka ny kinova farany an'ny OpenShot amin'ny Ubuntu 12.04
OpenShot dia mpamoaka horonantsary miavaka ho an'ny Linux. Amin'ity lahatsoratra ity izahay dia manazava ny fomba fametrahana ny kinova OpenShot farany amin'ny Ubuntu 12.04.
Ubuntu 12.10: Fanohanana MTP ao amin'ny GVFS
Torolàlana kely izay manazava ny fomba hanampiana ny fanohanana MTP (Media Transfer Protocol) ao Nautilus, mpitantana ny rakitra default ho an'ny Ubuntu 12.10.
Ahoana ny famoahana RAM amin'ny Ubuntu
Torolàlana tsotra izay mampiseho ny fomba hanafahana RAM ao Ubuntu miaraka amina baiko tsotra amin'ny alàlan'ny console nefa tsy very vaovao.
Ahoana ny fomba hanampiana fanohanana MTP ao Kubuntu
Torolàlana izay manazava ny fomba hanampiana ny fanohanana MTP ao amin'ny Dolphin amin'ny alàlan'ny fametrahana ny KIO-andevo mifanaraka amin'izany. MTP dia ampiasain'ny fitaovana Android, ankoatry ny hafa.
KDE 4.10: Fanatsarana an'i Kate
Ny kinova Kate vaovao tafiditra ao amin'ny KDE SC 4.10 dia manana lisitr'ireo fiasa vaovao, fanatsarana ary fanamboarana bibikely.
Ahoana ny fametrahana ny tsimbadika farany an'ny Liferea amin'ny Ubuntu
Torolàlana tsotra izay manondro ny dingana ilaina hametrahana ny kinova farany an'ny Liferea, mpamaky RSS matanjaka, ao amin'ny Ubuntu 12.10 sy Linux Mint 14.
KDE: Manampy sy manala ny fampiharana mihazakazaka amin'ny fanombohana
Torolàlana izay manazava ny fomba fampidirana sy fanesorana ny fanatanterahana ny script sy ny programa amin'ny fanombohana KDE amin'ny alàlan'ny modely fikirakirana Autorun.
Mametraka Internet Explorer 9, 8, 7 ary 6 amin'ny Linux
Ny kinova samihafa amin'ny Internet Explorer dia azo apetraka mora foana amin'ny Linux amin'ny alàlan'ny VirtualBox, izay tena ilaina tokoa ho an'ireo mpamorona tranonkala.
Nautilus: Fampiatoana ny lisitry ny antontan-taratasy vao tsy ela
Ny fanafoanana ny lisitry ny Nautilus Documents vao haingana dia fomba tsotra iray, manitsy rakitra fisie fotsiny.
KDE 4.10: Fanatsarana ny Gwenview 2.10
Miaraka amin'ny KDE SC 4.10 dia tonga i Gwenview 2.10. Ny mpanafatra sy ny fanatsarana ny mombamomba ny loko dia ny sasany amin'ireo endrika vaovao ananan'ny mpijery sary.
Famonoana ny fanatanterahana serivisy ao amin'ny KDE
Ao amin'ny KDE dia azontsika atao ny manafoana mora foana ireo serivisy izay tsy liana amin'ny fihazakazahana amin'ny fiandohan'ny fivoriana, hanafainganana ny fanombohana ny rafitra.
Ubuntu: Mampiseho ny karazana fiarovana ny fifandraisana Wi-Fi
Satria tsy mampiseho ny filaminan'ny fifandraisana Wi-Fi ny mpitantana ny tambajotra Ubuntu, dia tsara kokoa raha manantona safidy hafa antsoina hoe Wicd.
Famerenana indray ny firaisana
Indraindray ny Unity dia manomboka mihetsika tsy mandeha amin'ny laoniny na kamo; Raha te hiverina amin'ny ara-dalàna dia tsy maintsy averinao indray ny firaisana amin'ny baiko mifandraika amin'izany.
Ubuntu: mampihetsika ny feo fidirana
Torolàlana kely azo ampiharina izay manazava ny fomba hampiasana ny feo fidirana ao amin'ny Ubuntu 12.10 amin'ny fampidirana baiko amin'ny fanombohana ny rafitra.
FF Multi Converter, mpanova rehetra ao anaty iray
FF Multi Converter dia programa iray ahafahantsika manova horonan-tsary, feo, sary ary antontan-taratasy. Rehetra amin'ny fomba tsotra sy avy amin'ny interface tsara iray ihany.
Linux Mint 14 Nadia Misy izao
Fepetra takiana amin'ny fametrahana Linux Mint 14 Nadia ary koa ny endri-javatra lehibe
Fametrahana fonosana DEB haingana sy mora
GDebi dia fitaovana kely mamela antsika hametraka fonosana DEB haingana sy mora nefa tsy mila mandefa ny Ubuntu Software Center.
Fampiharana 10 be mpampiasa indrindra ao amin'ny Ubuntu
Lisitra ofisialin'ny fampiharana 10 be mpampiasa indrindra ao amin'ny Ubuntu Software Center, nosarahana roa, ny iray karama ary ny iray maimaim-poana
Mametraka Skype, (kinova farany), ao amin'ny Debian, Ubuntu ary ny derivatives
Fampianarana tsotra hametrahana marina ny kinova Skype ho an'ny Linux
OS Elementary, ovao ny zana-kazo-dock
Tutorial video tsotra hanesorana tanteraka an'i Plank ary hanovana azy ho cairo-dock ao amin'ny Elementary OS Luna
Manampy fanampiana ho an'ny fisie RAR ao amin'ny openSUSE 12.2
Torolàlana tsotra izay manazava ny fomba famoretana sy ny famoahana ny rakitra RAR ao amin'ny openSUSE 12.2. Mila manampy ny kitapom-bolan'ny Packman ianao.
Wallpaper 10 mahafinaritra ho an'ny Ubuntu 12.10 Quantal Quetzal
Fanangonana kely misy sehatr'asa birao folo mahavariana vonona hampiasaina amin'ny fametrahana Ubuntu 12.10 Quantal Quetzal.
Mametraka MDM 1.0.6 amin'ny Ubuntu 12.10
Torolàlana momba ny fametrahana ny kinova farany an'ny MDM, ny Linux Mint Display Manager, ao amin'ny Ubuntu 12.10 Quantal Quetzal amin'ny alàlan'ny fampidirana ny toerana anaovana azy.
Ahoana ny fomba fametahana rakitra amin'ny Ubuntu
Fomba tsotra hiarovana sy hanaingo ny rakitra ao amin'ny Ubuntu sy Debian amin'ny terminal ary miaraka amina baiko tokana.
Avadiho ny rakitra RPM ho DEB ary ny mifamadika amin'izany amin'ny Package Converter
Package Converter dia fifandraisana misy sary ho an'ny Alien izay mamela antsika hanova karazana fonosana isan-karazany amin'ny hafainganam-pandeha.
Mobile Media Converter, manova mora ny rakitra audio sy video
Mobile Media Converter dia programa iray ahafahantsika mamadika mora foana ireo rakitra audio sy video vonona hilalao amin'ny telefaona finday.
Mpanonta Subtitle, mamorona mora ny dikanteny anao manokana
Subtitle Editor dia programa Open Source izay ahafahanay mampiditra dikanteny tsara amin'ny lahatsarinay amin'ny fomba tena tsotra.
Mametraka Thunar 1.5.1 amin'ny Xubuntu 12.10
Torolàlana kely izay nanondroana ny fomba fametrahana Thunar 1.5.1, ny kinova voalohany an'ny mpitantana ny fisie misy tab, ao amin'ny Xubuntu 12.10.
Manampy tahiry ao amin'ny openSUSE
Torolàlana kely momba ny fomba fampidirana trano fitahirizana ao amin'ny openSUSE, mora sy haingana, amin'ny alàlan'ny console mampiasa Zypper.
KPassGen, mpamorona tenimiafina ho an'ny KDE
KPassGen dia mpamorona tenimiafina azo ovaina configureable ho an'ny KDE izay ahafahanao mamorona teny miafina hatramin'ny 1024 litera haingana sy mora.
XnConvert, handefasana sary avy amin'ny Linux
XnConvert dia rindrambaiko cross-platform maimaimpoana ho an'ny fanodinana sary batch, manomboka eto dia asehonay anao ny fomba fametrahana azy amin'ny Debian sy Ubuntu.
Linux App Finder Applications sy mpikaroka programa ho an'ny Linux
Linux App Finder dia motera fikarohana na mpanampy manaitaitra loharano misokatra na programa Open Source sy programa.
Mametraka XAMPP 1.8.1 amin'ny Ubuntu 12.10
Ampidiro ny kinova farany an'ny XAMPP - 1.8.1 amin'izao anoratanao izao - amin'ny Ubuntu 12.10 amin'ny alàlan'ny fampidirana ny PPA mifanaraka amin'izany.
Mamorona baiko manokana ao Ubuntu
Fampianarana hampiasa Aliases ary hamorona baiko manokana na hitsin-dàlana hampiasaina ao amin'ny terminal
Mamoròna boky manokana anao miaraka amin'i Sigil
Sigil dia tonian-dahatsoratra multiplatform eBook ary loharano misokatra tanteraka na Open Source, amin'ny lahatsoratra manaraka dia apetrakay ao amin'ny Ubuntu sy Debian
Fametrahana ireo rindranasa tsy misy kilema ao amin'ny KDE
Ny fametrahana ny rindranasa default ao amin'ny KDE dia asa tena tsotra, tsindrio roa monja avy amin'ny maodilo fandaminana.
Mametraka Chrome sy Chromium amin'ny Ubuntu / Debian
Fampianarana tsotra miaraka amin'ny horonan-tsary hahafantarana ny fomba fametrahana Chrome sy Chromium ao amin'ny rafitry ny fiasanay mifototra amin'ny Ubuntu na Debian
Blender 2.64a, maodely, sarimiaina ary famoronana sary telo-habe.
Blender dia tonian-dahatsoratra mahery vaika telo heny, izay azontsika alaina maimaimpoana ho an'ny rafitra fiasa rehetra.
Ahoana ny fandefasana amin'ny USB mankany amin'ny Bios tsy misy mpanohana miaraka amin'ny Plop Boot Manager
Ahoana ny fividianana booty avy amin'ny USB amin'ny biôs tsy tohanan'ny Plop Boot Manager 5.0, programa maimaimpoana hahatratrarana azy amin'ny fomba tena tsotra.
Ahoana ny fanavaozana ny Ubuntu 12.04 mankany Ubuntu 12.10
Torolàlana azo ampiasaina hanatsarana mivantana avy amin'ny Ubuntu 12.04 mankany amin'ny Ubuntu 12.10 PC
Arindrao ny fikandranao amin'ny tile-X
X-tile dia programa kely manampy antsika handamina ny fikandrana. Izy io dia miasa amin'ny tontolon'ny birao rehetra ary azo ampiasaina amin'ny console.
Unetbootin, fametrahana ary ampiasao horonantsary
Amin'ity horonantsary ity dia manazava ny fomba famoronana USB Bootable mampiasa Unetbootin aho. Ny horonan-tsary dia misy ny fampidinana Unetbootin ary koa ny fampiasana azy.
Ahoana ny fomba fampifanarahana an'i Ubuntu amin'ny endrika Netbook
Amin'ity tutorial-video na fikafika video ity dia afaka manatsara ny Ubuntu izahay ary mampifanaraka izany amin'ny refy amin'ny Netbook
Ahoana ny fizarazarana kapila mafy ao Ubuntu
Horonan-tsary tsotra handrafetana sy hampisarahana kapila mangirana ivelany na pen drive avy any Ubuntu
Ahoana ny fomba hanovana anarana ny rakitra amin'ny Linux
Tutorial video tsotra hahafantarana ny fomba fanovana anarana ny rakitra amin'ny ankapobeny amin'ny Linux amin'ny fampiasana gprename
Fampitana: mpanjifa BitTorrent maivana sy tsotra ary matanjaka
Ny fandefasana dia mpanjifa tambajotra BitTorrent mahery sy maivana miaraka amina interface samihafa. Na dia daemon aza dia azo ampandehanana.
Sintomy ny Ubuntu amin'ny alàlan'ny torrent
Manolo-kevitra ny hisintona ny Ubuntu amin'ny alàlan'ny tamba-jotra BitTorrent hisorohana ny servera ofisialy tsy ho tototry. Amin'ity lahatsoratra ity dia hataontsika amin'ny alàlan'ny Deluge.
Kazam, mandoro ny biraonao amin'ny Linux
Kazam dia programa maimaimpoana ho an'ny Linux izay ahafahantsika manoratra ireo seha-birao misy antsika, afaka misafidy ny birao iray manontolo na faritra iray manokana
Terminal fiandohan'ny: zip sy hamaha ny zotram-pifandraisana amin'ny rar
Fampianarana iray isaky ny dingana miaraka amin'ny horonan-tsary hahafantarana ny fomba fitantanana ny fisie RAR avy amin'ny terminal Linux misy anay, ao anatin'izany ny fampiharana azo ampiharina.
openSUSE: Manampy ny mpampiasa anay amin'ilay vondrona 'vboxusers'
Fampianarana hanampiana ny mpampiasa anay amin'ilay vondrona 'vboxusers' ao amin'ny openSUSE 12.2 miaraka amin'i KDE ho tontolon'ny birao.
Wammu dia mandrindra finday amin'ny Ubuntu
Wammu dia programa ho an'ny Linux afaka mandrindra finday mifototra amin'ny Symbian na rafitra fananana avy amin'ny marika toa ny Samsung, Nokia na Motorola.
Terminal ho an'ny vao manomboka: Video-tutorial I
Fanatanjahan-tena amin'ny horonan-tsary hahafantarana ny fomba fivezivezena manodidina ny terminal ary handika, hamindra, hanovana anarana na hamafana ireo rakitra sy lahatahiry.
Zahao ny hafanan'ny solosainao miaraka amin'ilay baiko 'sensor'
Sensors dia fitaovana kely ho an'ny Linux izay manampy antsika hanamarina ny mari-pana amin'ny CPU misy antsika, ankoatry ny zavatra hafa.
Ahoana ny fomba hitantanana ny fako avy amin'ny terminal
Fampianarana tsotra hitantanana ny fitoeram-bokatra avy amin'ny terminal Ubuntu, izay holazainay aminao ny baiko lehibe hampiasaina.
Ahoana ny fametrahana famantaranandro conky sy devlinux conky-peratra
Conky dia mpanara-maso ny rafitra ho an'ny linux, amin'ity lesona ity dia asehoko anao ny fomba fametrahana azy sy fametrahana ny hoditra hita amin'ny birao conky-peratra.
KDE 4.10: Asehoy sy araho ny fanatsarana ny fitantanana
Ny KDE 4.10 dia hanana modely fampirantiana sy fanaraha-maso vaovao sy nohavaozina voasoratra ao amin'ny QML.
Hanova endritsoratra amin'ny KDE
Ny KDE dia mamela anao hanamboatra ny birao amin'ny alàlan'ny fanovana mora foana ireo endritsoratra samihafa ampiasaina amin'ny rafitra.
Manova ny anaran'ny milina amin'ny openSUSE
Fampianarana tsikelikely hanovana ny anaran'ny ekipanay avy amin'ny YaST ao amin'ny openSUSE.
Gimp Resynthesizer, esory izay ampahany amin'ny sary
Gimp Resynthesizer dia plugin iray azo ampiasaina ho an'ny Gimp izay hofongarantsika amin'ny fomba matihanina amin'ny lafiny rehetra amin'ny sary
Nuvola Player amin'ny Linux Spotify
Nuvola Player dia mpilalao sahala amin'ny Spotify voaomana ho an'ny Linux ary manana safidy maro azo ampifanarahana.
Manamboatra ireo baraovan'ny KDE
Ny fampifanarahana ny biraovan'ny KDE amin'ny filan'ny mpampiasa dia mila potsitra vitsivitsy monja.
Ahoana ny fomba hanampiana kaonty ao amin'ny Pidgin, mpanjifa fandefasana hafatra eo noho eo
Tutorial tsotra tsotra misy sary handefasana ireo kaonty fandefasanao hafatra eo noho eo ao Pidgin
Ahoana ny fomba hanatsarana ny Ram amin'ny Linux
Torohevitra roa tsotra sy mahazatra ho an'ny fanatsarana ny Ram amin'ny Linux
PlayonLinux, na ny fomba fametrahana mora ny lalao Windows sy ny fampiharana amin'ny Linux
PlayonLinux dia sehatr'asa feno ho an'ny divay izay tsy manampy amin'ny fametrahana lalao sy rindrambaiko mifanentana afa-tsy amin'ny Windows ihany
Peppermint OS, distro Linux hafa mifototra amin'ny Ubuntu 12.04
Peppermint Os dia distro maivana indrindra nefa manana endrika ivelany sy fahombiazana mahatalanjona, miorina amin'ny Ubunto 12.04 miaraka amin'ny LXDE
Ahoana ny fametrahana lohahevitra amin'ny shell-gnome, (ao anatin'izany ny lohahevitra roa)
Fampianarana horonan-tsary tsotra hametrahana lohahevitra mahomby amin'ny gnome-shell, lohahevitra roa feno no ampidirina halefa.
Manova ny fijerin'ny Unity miaraka amin'ny fitaovana Ubuntu-tweak-fitaovana
Fampianarana horonan-tsary tsotra hametrahana fitaovana Ubuntu-tweak-tool sy ny lohateny Unity lehibe sy ny lafiny hanovana azy
Ahoana ny fametrahana extensions amin'ny gnome-shell
Tutorial video tsotra hametrahana extensions ao amin'ny gnome-shell, ilay birao mahavariana indrindra ho an'ny Linux.
Ampidiro VirtualBox 4.2 amin'ny Ubuntu 12.04
Ampidiro ao amin'ny Ubuntu (Kubuntu, Xubuntu, sns.) 4.2 ny kinova farany an'ny VirtualBox, 12.04.
Ubuntu 12.10 "Quantal Quetzal" amin'ny ASUS EEPC 1000HE
Izahay dia nanao fitsapana ny amin'ny fomba farany ny Ubuntu 12.10 Daily Build horonana sy ny fitondran-tenany, amin'ny Asus eepc 1000HE Netbook miaraka amin'ny Intel Atom N280
Deluge, mpanjifa BitTorrent maivana sy azo zahana
Deluge dia mpanjifa BitTorrent mora ampiasaina izay azo zahana indrindra noho ny fampiasana plugins.
Manampy plasmoids ao amin'ny KDE
Ny fampidirana plasmoids amin'ny birao sy tabilao KDE dia asa haingana sy mora.
Shutter, pikantsary ho an'ny Ubuntu misy safidy maro
Shutter dia mpaka sary amin'ny efijery manana safidy maro hafa noho ny mahazatra ao amin'ny Ubuntu 12.04
Ahoana ny fametrahana birao LXDE sy Xfce amin'ny Ubuntu
Ahoana ny fametrahana birao LXDE sy Xfce amin'ny distros Linux miorina amin'ny Debian, toy ny Ubuntu 12.04
Ahoana ny fametrahana an'i Fedora 17 tanteraka amin'ny Espaniôla
Fampianarana tsotra tsotra hahazoana ny distora Fedora 17 Linux amin'ny teny Castilian / Espaniôla
Endritsoratra mahafinaritra apetraka amin'ny Ubuntu
Ny fanangonana endritsoratra mahafinaritra sy ny fomba fametrahana azy ireo tsara ao amin'ny Ubuntu 12.04
Myunity 3.1.3, mahazoa ny tontonana Ubuntu Unity
Dingana tsotra hanarahana fametrahana Myunity amin'ny Ubuntu 12.04 sy ny dikan-teny taloha. Miaraka amin'ny Myunity dia hofehezintsika ny birao Unity.
Tizen, rafitra fiasa vaovao mifototra amin'ny Linux ho an'ny fitaovana finday
Tizen OS no filohan'ny orinasa lehibe toa an'i Samsung, HTC ary Intel hamorona rafitra miasa misokatra tanteraka miorina amin'ny Linux.
Mamorona fifandraisana VPN ao amin'ny KDE
Ny famoronana fifandraisana VPN mampiasa OpenVPN ao amin'ny KDE dia mora be noho i KNetworkManager.
Ahoana ny fanamarinana md5sum amin'ny Linux
Hamarino md5sum iray avy amin'ny console na terminal an'ny Linux
Thumbnail amin'ny horonan-tsary ao amin'ny Dolphin
Asaivo i Dolphin, mpitantana ny rakitra KDE, mamorona topi-maso kely momba ireo rakitrao.
Flowblade, mpamoaka horonantsary tsotra sy mahery
Flowblade dia mpamoaka horonantsary ho an'ny Linux izay manome ny hamafiny sy ny fampiasana azy. Ny fametrahana azy dia tena tsotra.
Amboary ny lokon'ny lohahevitra GTK
Amboary ny lokon'ny lohahevitra GTK2 sy GTK3 tianao indrindra amin'ny fitaovana GTK Theme Prefers.
Ahoana ny fametrahana ubuntu-tweak amin'ny Ubuntu 12.04
Fampianarana tsotra hametrahana Ubuntu-tweak ao amin'ny Ubuntu 12.04
Ampidiro Chromium amin'ny Kubuntu 12.04
Mametraha Chromium ao amin'ny Kubuntu 12.04 miaraka amin'i Muon na avy amin'ny console miaraka amin'ny baiko tsotra.
Tutorial-video hametrahana lohahevitra ao Cairo-Dock
Tutorial-video tsotra hametrahana lohahevitra tsara ao Cairo-Dock
Ovao ny solosainao amin'ny Ubuntu
Ovao ny solosainao Ubuntu PC - na fizarana hafa - avy amin'ny console mampiasa GNU nano.
Ahoana ny fametrahana Google Chrome amin'ny Fedora / Open Suse
Fampianarana tsotra hametrahana Google Chrome amin'ny Fedora, Open Suse ary ny derivatives.
Ahoana ny fomba hanaovana ny Windows ho safidy default amin'ny booty Linux Grub
Dingana tsotra hanarahana hanamboatra Linux Grub ary hahatonga an'i Windows ho safidy lehibe indrindra amin'ny boot aorian'ny fotoana misy anao.
Ahoana ny fomba hamerenana amin'ny laoniny ny Linux grub amin'ny Ubuntu 12.04
Fampianarana tsotra hamerenana ny grub Linux aorian'ny fametrahana ratsy na aorian'ny fametrahana Windows ao amin'ny rafitray.
RazorQT, birao maivana ho an'ny Ubuntu
Razor-QT dia birao iray tena mitovy amin'ny gnome mahazatra fa kosa mandany loharano vitsy noho ny masininay.
Ampidiro ny Opera 12.02 amin'ny Ubuntu 12.04
Ampidiro ny Opera 12.02 amin'ny Ubuntu 12.04 - ary zarao ny fizarana - amin'ny alàlan'ny fampidirana ny toerana fitahirizam-bokin'ny norveziana ofisialy.
Firefox 15: Atsaharo ny fizahana fampifanarahana plugin
Atsaharo ny fizahana fampifanarahana ampiana amin'ny Firefox amin'ny alàlan'ny safidin'ny mpikaroka mandroso.
Mamorona Ubuntu anao manokana miaraka amin'ny Ubuntu Builder
Ubuntu Builder dia mamela anao hamorona ny kinova Ubuntu anao amin'ny alàlan'ny fanamboarana ireo zavatra toy ny tontolon'ny birao, ny rindranasa ary ny tahiry.
Epiphany Web Browser, ny tranonkala Gnome maivana indrindra amin'ny rehetra
Epiphany dia mpizaha tranonkala misy loharano misokatra ary safidy tena tsara ho an'ireo mpizaha tranonkala lehibe
Ahoana ny fametrahana lohahevitra ao Kairo-Dock
Fampianarana tsotra sy fandraisana anjara amina lohahevitra hapetraka ao Cairo-Dock.
BleachBit, manafaha toerana amin'ny kapila mafy
BleachBit dia fitaovana mamela anao hamafa ireo rakitra amin'ny rafitra tsy ilaina intsony na tsy tadiavintsika tsotra izao.
DockBarX, ny bara Windows 7 amin'ny Linux
DockBarX dia clone an'ny biraon'ny Windows 7, miaraka amin'ity lesona ity dia hapetrakao tsy misy olana amin'ny distro Linux tianao indrindra.
Mamorona GIF mihetsika amin'ny horonan-tsary amin'ny Linux
Mamorona GIF mihetsiketsika avy amin'ny horonan-tsary ao Linux, noho ny GIMP sy OpenShot.
Ahoana ny fametrahana lohahevitra ao amin'ny Ubuntu Unity
Fampianarana tsotra hisintomana sy hampiharana lohahevitra ao amin'ny birao Ubuntu Unity
Pear Linux 5, distro Linux misy ny fisehoan'ny MAC OSx
Miaraka amin'ny Pear Linux 5, hanana rafitra miasa Linux miorina amin'ny Ubuntu 12.04 sy ny fisehoan'ny rafitra fiasa MAC OSx izahay.
Ahoana ny fanesorana ny fidirana mandeha ho azy avy amin'ny Linux
Fomba roa samihafa sy mora hanesorana ny fidirana mandeha ho azy avy amin'ny distro Linux any Debian.
Navoaka ny Ubuntu 12.04.1
Canonical sy ny ekipa Ubuntu dia namoaka Ubuntu 12.04.1, fanavaozana ny sary fametrahana izay manamboatra bug ary manampy fanatsarana.
Format Junkie, ovay mora foana ny horonan-tsary sy horonam-peo
Mivadika mora amin'ny horonan-tsary amin'ny Ubuntu amin'ny alàlan'ny fametrahana Format Junkie, mpanova horonan-tsary, feo ary sary.
Enlightenment, birao mahavariana ho an'ny Linux anay
Enlightenment dia birao iray ho an'ny Linux izay hahagaga anao hatramin'ny voalohany, hazavana lehibe ary fampiasa.
Ahoana ny fanavaozana ny distro Linux anao amin'ny kinova farany farany
Fampianarana tsotra momba ny fanavaozana ny rafitra fiasa miorina amin'ny Debian mankany amin'ny kinova farany azo antoka ao amin'ny rafitra fiasanao.
Ny divay ao amin'ny fametrahana Ubuntu 12 04 sy ny fikirakirana fototra
Fampianarana tsotra hametrahana divay ao amin'ny Ubuntu 12 04 na distro Linux any Debian
Linux Mint 13, fampandrenesana pop-up
Ahoana ny fomba hifehezana ny fampandrenesana Popup ao amin'ny Linux Mint 13 Maya
Ahoana ny fametrahana Handbrake amin'ny Ubuntu 12 04 (mpanova endrika endrika horonantsary)
Fampianarana tsotra hametrahana Handbrake amin'ny rafitra fiasa Linux any Debian
Ahoana ny fomba hamehezana ireo rakitra amin'ny alàlan'ny terminal Linux
Fampianarana tsotra miaraka amin'ireo baiko lehibe hahafantarana ny fomba fanindriana sy ny famoahana ny decompress amin'ny alàlan'ny terminal Linux
Distros Linux bebe kokoa ho an'ireo ankizy kely ao an-trano
Fitsinjarana Linux manokana vitsivitsy ho an'ny ankizy kely ao an-trano.
Distros Linux manokana ho an'ny ankizy kely
Fitsinjarana Linux manokana ho an'ny kely indrindra amin'ny trano
Fikirana Manager Compiz ao amin'ny Ubuntu 12 04
Fampianarana tsotra ho fantatra Ahoana ny fametrahana ny Compiz options Manager ao amin'ny Ubuntu 12 04.
Kitapo hitsin-dàlana ilaina amin'ny Ubuntu
Ny hitsin-dàlana fitendry 26 tena ilaina sy ampiasaina ao amin'ny Ubuntu
Plank, dock style Mac tsotra
Plank dia Dock tsotra sy maivana ho an'ny Linux miorina amin'ny Docky malaza. Plank dia mety amin'ny milina tsy manam-bola firy.
Ahoana ny fametrahana Ubuntu 12 04 miaraka amin'ny Windows
Torolàlana tsotra hametrahana mora foana ny Ubuntu 12 04 miaraka amin'ny Windows
APTonCD, hamoronana kapila fametrahana Linux fanao
Torolàlana tsotra amin'ny fampiasana APTonCD, programa Linux zanatany izay hanampy antsika hamorona CD na sary fametrahana manokana.
Ahoana ny fametrahana Google Chrome amin'ny Ubuntu
Fomba roa samihafa hametrahana Google Chrome amin'ny Ubuntu na Linux mifototra amin'ny Debian.
Ahoana ny fomba hamoronana USB azo entina miaraka amin'ny distro Linux Live marobe izay mampiasa Yumi
Yumi dia fitaovana maimaim-poana izay hanampy antsika hamorona USB Bootable misy distro Linux Live mihoatra ny iray.
Ny distros Linux sasany dia miavaka amin'ny Netbooks
Ny sasany amin'ireo distro Linux tsara indrindra natao tamin'ny Netbooks
Ahoana ny fametrahana Ubuntu amin'ny Mac Power PC (PPC) G4
Fampianarana tsotra hametrahana Ubuntu amin'ny Mac Power PC G4
Fitaovana birao Unity 5.0
Unity 5.0 no kintan'ny kinova Ubuntu 12 04 vaovao, ity birao vaovao ity na ny birao Ubuntu nohavaozina, ny Unity 5.0
Ahoana ny famerenana ny rafitrao amin'ny Ubuntu 12 04
Backup dia fampiharana Ubuntu 12 04 tompon-tany izay hanohana ireo lahatahiry voafantina
Puppy Linux, mety ho an'ny solosaina tsy manana loharanom-bola firy
Puppy Linux dia distro Linux miasa tanteraka, izay ahafahantsika manome fiainana sy ampiasaina amin'ny solosaina izay tsy manana loharanom-bola firy intsony.
Ahoana ny fomba famoronana Live CD avy amin'ny distro Linux miaraka amin'ny Unetbootin
Ahoana ny fampiasana Unetbootin ao amin'ny Ubuntu 12 04 hamoronana Linux Live CD
Fanesorana ny birao KDE ao amin'ny Ubuntu 12 04
Torolàlana hamafana tanteraka ny birao KDE amin'ny Ubuntu 12 04
Ahoana ny fametrahana birao KDE ao amin'ny Ubuntu 12 04
Fampianarana tsotra momba ny fametrahana ny birao KDE ao amin'ny Ubuntu 12 04
Ahoana ny fomba hifandraisanao amin'ny Android amin'ny alàlan'ny FTP
Fampianarana hifandraisana amin'ny fitaovana Android avy amin'ny nautilus amin'ny alàlan'ny FTP miaraka amin'ny FTPServer.
Ahoana ny fanomanana firmware mikirakira autoflasheable ho an'ny Heimdall
Fampianarana an-tsary tsotra momba ny fomba famoronana rindrambaiko mandeha ho azy ho an'ny Heimdall
XBMC foibe multimedia ho an'ny Linux
XBMC dia ivon-haino aman-jery malalaka Open Source. Miaraka amin'ny XBMC hofehezinay ny ampahany multimedia amin'ny PC.
Fandaharana tena ilaina amin'ny Ubuntu 12 04 Fizarana 2
Ampahany faharoa amin'ny lisitr'ireo programa ilaina ho an'ny rafitra fiasa mendrika ny sira, ary indrindra ho an'ny Ubuntu 12 04
Fandaharana tena ilaina amin'ny Ubuntu 12 04 Fizarana 1
Lisitr'ireo programa manokana izay tsy tokony hanjavona ao amin'ny Ubuntu 12 04 anao
Ahoana ny fametrahana Ubuntu12.04 amin'ny fitaovana Android miaraka amin'ny Ubuntu Installer
Ahoana ny fametrahana Ubuntu amin'ny fitaovana Android OS amin'ny fampiasana Ubuntu Installer
OpenShot mpamoaka horonantsary maimaimpoana ho an'ny Linux
OpenShot dia mpamoaka horonantsary maimaimpoana ary feno, izay hamoronana fanovana horonan-tsary saika matihanina.
Ahoana ny fametrahana Heimdall amin'ny Ubuntu 12.04
Fampianarana tsotra tohanan'ny horonan-tsary momba ny fomba fametrahana sy fampiasana Heimdall amin'ny rafitra fiasa Linux miorina amin'ny Ubuntu na Debian.
Ahoana ny fametrahana birao kanelina amin'ny Ubuntu 12.04
Fampianarana tsotra hahafantarana ny fomba fametrahana mora foana ny desktop Cinnamon ao amin'ny Ubuntu 12.04 ary atombohy amin'ny session vaovao.
Ahoana ny fifehezana sy fanovana ny lafiny amin'ny gnome-shell
Ahoana ny fametrahana sy fanaraha-maso fitaovana fanovana ho an'ny shell-gnome, fitaovana iray tena ilaina amin'ny rafitra fiasa Linux misy ny birao gnome-shell
Amboary ny olana amin'ny avconv (ffmpeg)
Fampianarana tsotra hamahana olana rehefa mampiasa ny baiko avconv hanovana ireo rakitra audio sy horonan-tsary.
Manomboka amin'ny terminal: mandidia avconv -i
Fampianarana tsotra tsotra momba ny Fampiasana ny baiko avconv -i, izay hanompo, ankoatry ny zavatra hafa, hanovana ireo rakitra video.
Ahoana ny fomba hanaovana mpizara Ubuntu 12.04 ho an'ny PS3 amin'ny Mediatomb
Fampianarana tsotra hamoronana server multimedia amin'ny Ubuntu sy mediatomb
Miditra amin'ny terminal: manavao sy mametraka rindranasa
Fampianarana tsotra ho an'ny vao manomboka amin'ny fametrahana ny rindranasa sy fanavaozana ny rafitra avy amin'ny terminal Linux
Kairo-dock no mpandefa tsara indrindra ho an'ny Linux
Cairo-dock dia mpandefa superconfigurable ho an'ny Linux, izay manome antsika ny fisehoan'ny Mac dock miampy toe-javatra sy vokany maro.
Miditra amin'ny terminal: baiko fototra
Lisitry ny baiko fototra hanodinkodinana rakitra avy amin'ny terminal Linux
Linux Mint 13 Maya, iray amin'ireo diso tsara indrindra miorina amin'ny Debian
Linux Mint 13 Maya, dia iray amin'ireo fizarana Linux tsara indrindra misy amin'izao fotoana izao, ary izy irery ihany no afaka ...
Ahoana ny fanovana ny birao firaisankina ho shell-gnome
Salama namana Ubunlog, amin'ity fampianarana fototra ity dia hampianariko anao ny fomba fanovana ny birao misy anao ...
Ahoana ny fametrahana Ubuntu 12.04 LTS «Precise Pangolin» - mampifandray ireo namana
Ny Ubuntu 12.04 LTS «Precise Pangolin» dia havoaka anio tsy ho ela, isika izay efa nampiasa Ubuntu ...
Ampidiro ny Clockwork Recovery (CWM) amin'ny takelaka Ainol Novo 7 Elf
Nandritra ny iray volana na latsaky ny iray volana dia izaho no tompona faly nitondra takelaka sinoa Ainol tsara tarehy, ilay maodely Novo7 ...
Kitendry hitsin-dàlana amin'ny Ubuntu 12.04
Raha tianao ny mitantana ny hitsin-dàlana fitendry mba hiasa ao amin'ny tontolon'ny birao misy anao, amin'ny Ubuntu 12.04 LTS dia hanana ...
Desktop Linuxeros # 31 Fanontana farany
Ry namana tena tsara, ao amin'ny fanontana farany an'ny Desktop Linuxeros izahay aorian'ny fotoana izay anananao ...
Desktop Linuxeros # 30
Fanontana vaovao an'ny Escritorios Linuxeros, ilay faritra ao amin'ny bilaogy izay sakaizanao namaky namana hatrany noho ny fandraisanao anjara isam-bolana ...
Ahoana ny fizarana ny rindrambaiko amin'ny Ubuntu sy distros hafa
Raha programmer ianao na tsia ary maniry fomba hametrahana an'io fampiharana na script io, dia misy fomba maro….
[Meme] Inona no zarainao?
Ny tena marina dia tsy haiko ny manombohana an'ity lahatsoratra ity, heveriko fa satria ny zava-drehetra dia resaka famelana ny fikorianan'ny hevitra ...
[Firaisankina] Manampia kisary fampisehoana birao amin'ny mpandefa
Ny Unity dia tsy mitondra applet ao amin'ny Ubuntu 11.04 mba hampisehoana ny birao amin'ny mpandefa raha toa ka misy ...
Alefaso ny faritra fampandrenesana ho an'ny rindranasa rehetra ao amin'ny Ubuntu 11.04
Ao amin'ny Ubuntu 11.04, ny faritra fampandrenesana (na systray) ihany no ahafahana manao fampiharana sasany, Java, Mumble, Divay, Skype, ary hp-systray, ity ...
Firaisankina sa akorandriaka?
Ity dia vahinin'ny vahiny nosoratan'i David Gómez avy amin'izao tontolo izao araka ny Linux. Navoaka omaly i Ubuntu 11.04 Natty ...
[Soso-kevitra] Ahoana ny fomba hiverenana ao amin'ny fikirana default an'ny Unity
Raha aorian'ny famakiana ireo fidirana miaraka amin'ny safidin'ny fikirakira Unity dia "nifindra" tamin'ny rafitrao ianao ary tsy dia be loatra ...
Andramo ny Ubuntu 11.04 Online
Rehefa nolazaina fa efa hifarana ny serivisy Shipit an'i Canonical, dia niresaka momba ny ...
Desktop Linuxeros # 29
Fanontana vaovao amin'ny Desks Linuxeros miaraka aminao, toy ny mahazatra, tsy sasatra aho misaotra ny fandraisana anjara goavana tamin'io volana io ...
Desktop Linuxeros # 28
Rehefa afaka sasatra iray volana dia miverina ny faritra ao amin'ny bilaogy, izay efa fisaorana mahazatra noho ...
BackUps avy amin'ny terminal misy script ao amin'ny Bash Shell
Tamin'ny 14 Febroary, nahita boky navoakan'i Simrat Pal Singh Khokhar tao amin'ny Linux.com aho, izay anolorany script ...
Fantaro ny toeran'ny bateria avy amin'ny terminal
Ny iray amin'ireo zavatra mampiahiahy antsika rehetra miasa amin'ny solosaina finday dia ny fananantsika bateria sisa tavela alohan'ny hikatonan'ny solosaina finday ary tapitra tampoka ny vokatra. Izany no mahatonga antsika hijery tsara ny fampiharana izay mitondra antsika tontolon'ny birao izay ahitantsika tatitra tsy mitombina momba ny fotoana sisa tavela amin'ny bateria. Milaza aho fa tsy azo tanterahina satria maharitra 30 minitra ny fiainana bateria dia 10 minitra eo ho eo, ary betsaka kokoa raha ao anatin'ireo heverina fa 30 minitra nomenao hanao zavatra mandany loharano maro ao amin'ny masininao.
Ankoatry ny fanomezana data tsy marina aminay, ireo rindrambaiko mini ireo dia mira amin'ny fahatsorana, manome anay tsy misy fampahalalana fanampiny, zavatra iray izay manelingelina ahy manokana, satria tiako ho fantatra hoe manao ahoana marina ny bateriko, fa tsy ny minitra diso sisa tavela.
Manatsara ny haben'ny endritsoratra ao amin'ny Ubuntu
Hatramin'ny andiany 10.10 Ubuntu dia miaraka aminy ny fampidirana endritsoratra tena tsara ary heveriko fa ...
Atsaharo ny fampiasana kapila USB ho an'ny mpampiasa ao amin'ny Linux
Ny iray amin'ireo olana ara-piarovana mahazatra indrindra ao amin'ny orinasa dia ny famoahana vaovao, amin'ny ankapobeny dia noho ny fidirana tsy voafetra amin'ny fampiasana fitaovana fitehirizana betsaka toy ny kitapom-batsy USB sy kapila, mpamono CD / DVD, Internet, sns.
Amin'ity indray mitoraka ity dia hasehoko anao ny fomba ahafahantsika mametra ny fidiran'ny mpampiasa amin'ireo fitaovana fitehirizana USB ao Linux, mba tsy hahavery ny fidirana amin'ny seranana raha sendra mampifandray totozy ianao USB na andefaso bateria amin'ny alalany.
Fanamarihana: ho kilemaina ny karazana fitaovana fitehirizana USB rehetra, ao anatin'izany ny mpilalao mozika, fakan-tsary sns.
Ovay ny sary an-tsary GDM ao amin'ny Ubuntu
Ubuntu manana an'io sary an-tsaina io izay ampiasainao (Ny tiako holazaina dia volomparasy) toy ny rindrina tsy misy fangarony ho an'ny GDM, fa ny tena izy dia tsy tiako akory ny mahita an'io amin'ny fotoana fohy rehefa miditra ao amin'ny solosainako aho.
Izany no antony hianarantsika fomba roa hanovana an'ity fiaviana ity ho iray izay tadiavintsika bebe kokoa na izay mifanaraka kokoa amin'ny sary an-tsaina ampiasaintsika amin'ny birao.
Voalohany indrindra, tsy maintsy takatsika izany Ubuntu mitantana ny fisehoan'ny GDM miaraka amina lohahevitra, ka mazàna tsy azo atao ny manova ny fisehoan'io raha tsy manova ny lohahevitra iray manontolo, fa ny lohahevitra ambience Tena tsara tarehy izy io ary tsy mieritreritra aho, toa ny ataoko, fa te hanova azy ireo izy ireo.
Ity lohahevitra ity dia mampiasa ny sary miverina aorin-toerana /usr/share/backgrounds/warty-final-ubuntu.png, izay ny sary hitantsika fa ny toerana misy anao default amin'ny Ubuntu (eny, ilay volomparasy mahatsiravina).
Fikirana 4 konky izay azonao antoka fa tianao
conky _HUD Misintona ary torolalana conky_red Sintomy ary torolàlana conky_grey Sintomy ary torolàlana conky_orange Sintomy sy torolalana hametrahana conky…
Ireo zavatra 10 tiako indrindra amin'ny Firefox 4 vaovao
Araka ny efa fantatry ny maro aminareo, ny kinova farany an'ny Firefox 4, antenaina hivoaka amin'ny faran'ny volana feb, ary vao omaly beta 9 tamin'ity mpitety tranonkala nandrasana hatry ny ela ity dia navotsotra izay mahatonga ny fahamendrehana ho lasa mpitety tranonkala default.
Noho io antony io, eto aho dia manao lisitr'ireo zavatra 10 tiako indrindra momba ny Firefox 4, izay mety hahatonga ahy hiova ho Firefox avy any Google Chrome amin'ny faran'ny volana manaraka.
Desktop Linuxeros # 27
Fanontana voalohany tamin'ny taona Escritorios Linuxeros, ny fizarana ao amin'ny bilaogy izay efa mahazatra noho ny fisaorana ...
WDT, fitaovana manaitra ny mpamorona tranonkala
Linux Tsy manana rindranasa be dia be izay manampy betsaka amin'ny famolavolana pejin-tranonkala, ary izany no tiako holazaina fa ny rindranasa izay manome fitaovana manampy amin'ny fitehirizana fotoana rehefa manoratra kaody, satria saika ireo izay misy dia mazàna manome safidy ho an'ny deboka sy kaody fanoratana fotsiny. noho ny manolotra tontolo iainana Fandrarian-dahatsoratra marevaka.
Soa ihany fa misy WDT (Fitaovana fampiroboroboana tranonkala), fampiharana mahery vaika ahafahantsika mamorona fomba sy bokotra haingana sy mora CSS3, tabilao mampiasa Google API, zahao mailaka avy amin'i Gmail, mandika lahatsoratra amin'ny Dikanteny Google, manaova sary vector, backup backup ary lava be (lava be) sns.
Ahoana ny fomba hanampiana tahiry PPA amin'ny Debian sy ny fizarana mifototra amin'izany
Ny iray amin'ireo tombony lehibe ananan'ny Ubuntu amin'ny fizarana hafa dia ny fisian'ny fampiharana be dia be azo zaraina amin'ity fizarana ity sy ny fanamorana ny fametrahana sy fitazonana azy ireo amin'ny alàlan'ny Tahiry PPA misaotra Launchpad.
Mampalahelo fa ny baiko add-apt-repository Azo alaina ho an'ny Ubuntu fotsiny izy io, noho izany ny fampidirana ireo trano fitahirizam-bokatra ireo dia tsy dia mora loatra raha te hanampy azy amin'ny fizarana toy izany ianao Debian na mifototra amin'izany dia azonao atao amin'ny ankapobeny ny mampiasa ny fonosana .deb noforonina ho an'ny Ubuntu.
Tsy midika akory izany fa tsy afaka mampiasa ireo repositories ireo izahay any Debian, satria i Debian koa dia manome fomba hanampiana tahiry manokana, ary avy eo dia hianarantsika ny fomba hanaovana izany.
Ahoana ny fanamboarana ny olan'ny Atheros WiFi amin'ny Ubuntu Maverick
Tsy olana vaovao io, satria Ubuntu 10.04 Lucid Lynx, kanônika manana olana ianao amin'ny fahazoana karatra tambajotra tsy misy tariby marika marika maro hiasa tsara Atheros.
Raha ny momba an'i Lucid Lynx dia voavaha io olana io, naneho hevitra tamin'ny lisitra mainty natao ho an'ny mpamily Atheros ao anaty fisie fikirakirana. /etc/modprobe.d/blacklist-ath_pci.conf ary mametraka ny linux-backports-modules araka ny voalaza eto Fidirana NetStorming.
Mampalahelo fa tsy mihatra io vahaolana io Ubuntu 10.10 Maverick Meerkat, satria ny fampiharana an'ity vahaolana ity dia mitarika amin'ny fanjavonan'ny tambajotra WiFi tanteraka ary raha miziriziry foana ianao dia havela tsy hanana rafitra toa ahy. 😀
Ahoana ny fomba fanangonana Kernel 2.6.36.2 ao amin'ny Ubuntu miaraka amin'ny patch 200-line
Betsaka aminareo no toa nanana olana tamin'ny fametrahana ilay Kernel dia nanomana ny tsipika 200 tsipika amin'ny masininao dia antenaina izany, ka tsara kokoa hatrany ny manana a voam voaangona mivantana ao amin'ny masininay noho ny amin'ny milina vahiny, mba haka ny maritrano ny masininay sy ny fikirakirana ankapobeny ny fitaovana.
Noho io antony io dia eto no ampianarako ny tena sahy indrindra, ny fomba fanangonana ny Kernel azy ireo (2.6.36.2) ao amin'ny Ubuntu (notsapaina tamin'ny Ubuntu 10.10) miaraka amin'ny patch 200-tsipika tafiditra ao. Aza adino fa ity dingana ity dia tokony hatao amin'ny raharahanao manokana, mitaky fonosana marobe ho alaina sy fotoana fanangonana avo lenta.
Desktop Linuxeros # 26
Izahay dia mamarana ny andiany farany amin'ny taona Escritorios Linuxeros miaraka amin'ny fandraisan'anjaranareo namana mpamaky malala, ahoana ...
Desktop Linuxeros # 25
Fanontana 25 de Desks Linuxeros fizarana efa mahazatra ao amin'ny bilaogy, izay misy anao. ry mpamaky malala, mampianatra daholo ...
Mahazoa vahaolana avo lenta kokoa, miaraka amin'ireo mpamily NVIDIA ao Ubuntu
Ity dia olana iray mahazo ahy amin'ny PC, Ubuntu ary ny mpamily Nvidia, aorian'ny fametrahana azy ...
Desktop Linuxeros # 24
Fanontana vaovao amin'ny Desks Linuxeros ny ampahan'ny bilaogy izay anehoan'ny mpamaky ny birao GNU / Linux, izay ...
Ahoana ny fametrahana Hamachi ao Ubuntu ary tsy ho faty manandrana
Ahoana ny fametrahana Hamachi ao Ubuntu ary tsy ho faty manandrana Nohavaozina 04/05/2011 Miaraka amin'ity torolàlana kely ity dia afaka mametraka hamachi isika ...
QInk, zahao ny haavon'ny ranomainty an'ny mpanonta anay ao amin'ny Ubuntu
QInk dia rindranasa iray izay manampy anay hifehezana ny haavon'ny ranomainty amin'ny mpanonta ao Ubuntu, zavatra iray izay ...
Apetraho amin'ny fomba torimaso i Ubuntu fa tsy hibernation
Raha te hametraka ny solosainao amin'ny fomba matory ianao fa tsy hibernate rehefa tsy miasa izy, ny fikirana Ubuntu ...
ClipGrab, ampidino horonan-tsary an-tserasera amin'ny ubuntu
ClipGrab dia rindranasa maimaimpoana ambanin'ny fahazoan-dàlana GPL izay ampiasaina hisintomana horonantsary an-tserasera amin'ny serivisy samihafa, manohana ny fampiharana ...
Fitaovana fikirakirana Ubuntu sary
Raha mahazo alalana avy amin'ny tompona bilaogy aho dia hanao lahatsoratra vitsivitsy momba ny ubuntu amin'ity bilaogy ity 🙂 Ao ...
Mamorona logo Ubuntu amin'ny Inkscape
Tutorial video mahaliana nataon'ny mponin'i Ubuntu Nicaragua ao anatin'ny tetikasan'izy ireo Pildoras Ubunteras, tamin'ity indray mitoraka ity ...
Ampidiro ny mpizara VPN anao miaraka amin'ny OpenVPN amin'ny Server Ubuntu 10.04
Ampidiro ny mpizara VPN anao miaraka amin'ny OpenVPN amin'ny Ubuntu 10.04 Server ATTENTION Rehefa afaka kelikely, tsy nandefa ...
Desktop Linuxeros # 23
Andiany vaovao amin'ny Desktop Linux, ny faritra ao amin'ny bilaogy anehoan'ny mpamaky ny birao GNU / Linux, ity ...
mdf2iso, avadiho ny sary MDF ho ISO amin'ny Linux
Omaly aho nahita sary CD izay tsy maintsy noraketiko fa an'ny .MDF karazana ka ...
iX: Ubuntu ho an'ny iPhone sy iPod Touch
Vaovao tsara be ho antsika rehetra izay manana iPhone na iPod Touch ary reraka ...
Amboary ny olan'ny Rhythmbox sync - iPhone na iPod
Rhythmbox dia nanjary mpilalao mozika sy haino aman-jery malaza indrindra ary be mpampiasa indrindra ao Ubuntu. Fa…
Desktop Linuxeros # 22
Fanontana vaovao an'ny Escritorios Linuxeros, ilay fizarana mahazatra ankehitriny ao amin'ny bilaogy izay ampisehoanao anay mpamaky malala ...
Mamorona hitsin-dalana hanokatra Nautilus ho faka ao Ubuntu
Te hanana hitsin-dàlana ao amin'ny menio fampiharana Nautilus ianao miaraka amin'ny tombotsoan'ny root rehefa ...
Ampidiro ao amin'ny Ubuntu ny Ralink RT3090
Andao alao sary an-tsaina izao toe-javatra manaraka izao, mividy solosaina finday ianao ary mametaka Ubuntu ary tsy mamantatra ny tamba-jotra na Wifi Network izany, na ny ratsy kokoa aza ny tambajotra Lan na Cable dia tsy hita ihany koa, satria ireo chip ireo dia mampiasa mpamily tompony ary tsy tafiditra. ao amin'ny kernel ubuntu, noho izany dia tsy maintsy apetrakao ho fanampiny, arakaraka ny zavatra niainako ny laptop MSI dia manana an'ity chip rt3090 ity.
Rotating Wallpapers ao Ubuntu
Ho an'ireo izay tia ahy dia manana fanangonana tahiry be dia be ary tsy te hiova iray isaky ny mandeha ...
Ampidiro ny mpizara Jabber anao miaraka amin'ny OpenFire amin'ny Ubuntu Linux
mamorona ny rafitra fandefasan-kafatra eo noho eo, miaraka amin'ny jabber (mitovy amin'ny resaka google),
OpenFire dia mpizara jabber tantanan'ny tranonkala (toy ny router na modem), voasoratra amin'ny Java ary GPL.
raha hiasa izany dia mila apetraka Apache2 + MySQL + PHP5 ianao ary tsy maharary ny phpmyadmin
Mametraka Apache2 + MySQL + PHP5 + phpmyadmin:
Mametraka Windows Font ao amin'ny Ubuntu
Ny tantaran'ity lahatsoratra ity dia avy amin'ny fametrahana Dropbox amin'ny solosaina finday miaraka amin'i Lucid Lynx ao an-trano sahady ...
5 Fampiharana fitantanana sary miavaka
Ubuntu Lucid Lynx dia misy f-default F-Spot, mpitantana sary malina sy ilaina. Fa ho antsika liana ...
Desktop Linuxeros # 21
Fanontana vaovao an'ny Escritorios Linuxeros, ny fizarana isam-bolana izay anehoan'ny mpamaky bilaogy ny fomba nanarahan'izy ireo ny ...
Kubuntu 10.04, sembana ny mpitantana ny tambajotra, vahaolana
Andro vitsy lasa izay dia nametraka ny Kubuntu 10.04 tao amin'ny kahie vadiko aho, nandeha tsara be ny zava-drehetra nandritra ny andro vitsivitsy, ...
Easy CV 2 - Manoratra ny CV amin'ny Ubuntu
Easy CV 2 dia fampiharana noforonin'i juancarlopaco izay mpanoratra ny fampiharana RadioGUI izay ...
Desktop Linuxeros # 20
Fanontana vaovao an'ny Escritorios Linuxeros ny fizarana isam-bolana izay anehoan'ny mpamaky bilaogy ny fomba nanarahan'izy ireo ...
Desktop Linuxeros # 17
Fanontana vaovao an'ny Desks Linuxeros, toy ny mahazatra, misaotra ny rehetra tamin'ny fandraisana anjara ananany isam-bolana amin'ity fizarana ity, ...
Desktop Linuxeros # 16
Andiany vaovao amin'ny fanontana isam-bolana an'ny Escritorios Linuxeros, ho fisaorana hatrany an'ireo izay mandefa isam-bolana ...
Wallpapers Ubuntu (ho an'ny lehilahy)
Te hanana rindrambaiko Ubuntu ianao? eto avelako ny sasany ary tena tsara! Manokana ho an'ny lehilahy 😉 Hita amin'ny Wallbase Aza ...
Alefaso ny keypad isa ao amin'ny Kubuntu amin'ny fanombohana
Soso-kevitra izay azo antoka fa ho hadalana kely, fa vaovao kosa aho amin'ny KDE, ka ny zavatra rehetra ...
Esory ny voany taloha ao Ubuntu
Hatramin'ny nivoahan'i Karmic dia nisy fanavaozana kernel marobe, ary ny kinova kernel taloha dia tsy esorina, ...
Browser Chromium amin'ny teny espaniola amin'ny ubuntu
Nandritra ny andro vitsivitsy dia nampiasa Chromium indrindra tao amin'ny netbook aho, satria hitako fa milay kokoa ary ...
GIMP 2.6.8, .deb fonosana ho an'ny Ubuntu
Azo alaina ny GIMP kinova 2.6.8 ary azonay apetraka amin'ny Ubuntu izany noho ny Getdeb raha nametraka Ubuntu ianao ...
Panel mangarahara sy Menu mampiasa Compiz
Aorian'ny fampiharana an'io fanahafana io ao amin'ny Compiz, hiseho ny menio sy ny takelaka (na dia tsy tsikaritra aza izany amin'ny pikantsary ...
Ampidiro ny Ubuntu 9.04 "Jaunty Jackalope"
Nanararaotra ny zava-misy fa andro lasa izay dia nametraka ny Ubuntu 9.04 beta aho, naka sary vitsivitsy momba ny fizotrany niresaka, hatramin'ny ...
Ho an'ny Canon Digital navoakan'i Daniel Filmus, Vía Libre dia mangataka mpihaino
Amin'ny herinandro ambony, vondron'olona, ​​fikambanana ary orinasa mifandray amin'ny fampiasana teknolojia vaovao, hangataka ...
Aza mikapoka ahy, Ubuntu aho!
Ny famakiana ny Ubuntu Life, hitako ity lahatsoratra ity, navoaka voalohany tao amin'ny Operative Systemz Comics, izay ekeko amin'ilay lehibe ...
Conky, ny fanamboarako
Nangataka ahy i Fecfactor omaly hamoaka ny fikirakirana ny konky izay asehoko amin'ny pikantsary etsy ambany. Ahoana no ahafahanao ...
Inona izany momba ny linux? Maninona no mampiasa linux?
Rehefa namaky ny bilaogin'i Casidiablo aho dia nahita an'ity lahatsoratra mahaliana ity izay efa nisy nandritra ny fotoana kelikely ary izy tenany ihany no nandika. Inona…